isivumelwano: lg bukela i-urbane 2nd edition ithengiswa nge $ 171.99 nje kwi-ebay
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Idili: I-LG Bukela i-Urbane 2nd Edition iyathengiswa nge-171,99 $ kuphela kwi-eBay
Inkqubo ye- I-LG Bukela i-Urbane yesi-2 yoHlelo yenye yeewatchwatches eziya kufumana uhlaziyo olulindelweyo kakhulu lwe-Android Wear 2.0 kwiiveki ezizayo. Nangona ezinye izixhobo ezinokunxitywa ze-LG njenge Bukela R kwaye Bukela i-Urbane sele ziphuculwe, uHlelo lwe-Urbane 2 kulindeleke ukuba lufumane uhlaziyo lwe-Android Wear 2.0 ngelinye ixesha kule nyanga.
Ukuba awunayo i-LG Bukela i-Urbane 2nd Edition okwangoku, ngoku ingalixesha elifanelekileyo lokuba uqikelele ukuthenga enye kuba i-smartwatch ngoku iyathengiswa kwi-eBay ngexabiso eliphantsi kakhulu.
I-smartwatch yayixhomekeke kunyuselo olwahlukeneyo, kodwa ayikaze ibe ngexabiso eliphantsi kude kube ngoku. Okwangoku I-LG Bukela i-Urbane yesi-2 yoHlelo ithengisa nge- $ 171.99, emalunga neepesenti ezingama-57 kwixabiso lentengiso. Nangona oku kungabonakali njengexesha elilinganiselweyo, umthengisi uthi ubuninzi beewatchwatches ziyafumaneka ngeli xabiso.
Kodwa kukho iindaba ezimnandi, njengoko umthengisi ehambisa ngenqanawa naphina emhlabeni, ucinga ukuba uza kubhatala iirhafu zokuhambisa kunye neendleko zokungenisa ukuba kufanelekile. Kananjalo, iwatchwatch yakho iya kuba phantsi kwewaranti ye-LG, ke awuzuphumelela kwaye akufuneki ukhathazeke malunga nonyaka okanye njalo.
I-LG Bukela i-Urbane yesi-2 yoHlelo
indlela yokuvula uluhlu oluhlu
Uvavanyo lwe-Apple iPhone 6s Plus
I-Verizon, T-Mobile, kunye ne-AT & T ngokukhawuleza kwezicwangciso zokunxibelelana kwenethiwekhi ye-2021
Indlela yokuthatha umfanekiso weskrini-skrini kwi-Samsung Galaxy S21
Umlilo E5 Dlala kunye noPhononongo lwe-E5 Plus